कोरोनाविरुद्धको खोप अब कहिले ? – Himalitimes
२०७८ बैशाख २२ ०६:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिद गर्न कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिएको छ ।भारतसहित चीन, रूस र अमेरिकाबाट खोप ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट पहल अघि बढाइएको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत खोप खरिदका लागि छनोट गरिएको मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत खरिद तथा अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडा सक्रिय भएका छन् ।
भारत र चीनका साथै कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत प्राप्त खोप २१ लाखभन्दा बढी नेपालीले लगाएका छन् । भारतले सबैभन्दा पहिले कोभिसिल्ड खोप १० लाख डोज अनुदानमा दिएको थियो ।
त्यस्तै उसले सेनालाई १ लाख डोज उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि सरकारले २० लाख डोज खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । जसमध्ये १० लाख डोज आए पनि बाँकी आइनसकेको डा. गौतमले बताए ।
‘तुरुन्तै आउनुपर्ने त हो तर ढिलाइ भइरहेको छ’, डा. गौतमले भने। चार डलरका दरले अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ३ लाख ४८ हजार डोज खोप ल्याइएको थियो । यसबाहेक चीनले पनि ८ लाख डोज खोप अनुदानमा दिएको थियो । कोभिसिल्ड र भेरोसिल गरी २१ लाख १२ हजार १९ जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाएको डा. गौतमले बताए ।